January 2, 2021 - Achawlaymyar
ဆွမ်းလောင်းရခြင်း အကျိုး (၁၂)ပါး
January 2, 2021 by Achawlaymyar
၁။ တာဝတိံသာနတ်ပြည် တစ်ထောင်သောနတ်မင်းတို့၏ မိဖုရားအဖြစ်ကိုရခြင်း။ ၂။ တစ်ထောင်သော စကြာမင်းတို့၏ မိဖုရားအဖြစ်ကို ရခြင်း။ ၃။ မရေတွက်နိုင်သော ပဒေသရာဇ်မင်းအဖြစ်ကို ရခြင်း။ ၄။ ကြာညိုပန်းအဆင်းနှင့် တူသော အဆင်းရှိသည် ဖြစ်၍ အလွန် အဆင်းလှခြင်း။ ၅။ ကိုယ်အင်္ဂါ အားလုံး နှင့် ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ လွန်စွာ ရှုချင် စဖွယ် ရှိခြင်း။ ၆။ မြတ်သော အမျိုး၌ ဖြစ်၍ အလင်းရောင် ကိုဆောင်နိုင်ခြင်း။ ၇။ မောင်းမ တစ်ထောင် တို့၏ အကြီးအမှုး ဖြစ်ခြင်း။ ၈။ မရေမတွက်နိုင်သော သင်္ကန်း, ဆွမ်း, ဆေးပစ္စည်း ကျောင်း အိပ်ရာနေရာတို့ကို ရရှိခြင်း။ ၉။ ဆွမ်းလှူခဲ့သည့် အချိန်မှ စ၍ သုံးဆယ့်တစ်ကမ္ဘာ … Read more
ဒီအိမ်မက်တွေ မက်တတ်ရင်သိမ်းထားပါ (က) မှ (မ) အထိ (က) မှ (မ) ထိ [ က ] နှင့်ပက်သက်သော အိပ်မက်များ ၁။ ကြာမျိုးငါးပါးအနံ့ကို ရှုရသည်ဟု မြင်မက်မူ တည်ကြည့်စွာ ဂုဏ်သတင်းကျော်စောရအံ့ ၂။ ကြာညိုပန်းကို ပန်ရသည်ဟု မြင်မက်မူု မယားကောင်းရအံ့ ၃။ ကြာသွတ်အိုးနှင့် ရေချိုးရသည်ဟု မြင်မက်မူ သူတစ်ပါးတို့၏မှီခိုရာ ဖြစ်အံ့။ ကြာသွတ်အိုးမြင်မက်မူ စည်းစိမ်များအံ့ ၄။ ကြာပန်းစသည်မြင်မက်မူ ဖျားနာအံ့ ၅။ ကျွဲစီးရသည်ဟု မြင်မက်မူ ကျေးကျွန်ရအံ့ ၆။ ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်၊ မြေခွေး၊ လင်းတ တိရစ္ဆာန်တို့ကို မြင်မက်မူ ဥပါဒ်ရောက်အံ့ ၇။ ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်၊ ဆင်၊ … Read more
ရင့်ကျက်တဲ့ ချစ်သူကောင်လေးတွေမှာသာ ရှိနေတတ်တဲ့ လက္ခဏာရပ်များ…
ရင့်ကျက်တဲ့ ချစ်သူကောင်လေးတွေမှာသာ ရှိနေတတ်တဲ့ လက္ခဏာရပ်များ… လူတိုင်းက အသက်ကြီးလာတာနဲ့ ရင့်ကျက်လာတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ရင့်ကျက်လာတာ မတူသလိုမျိုး ရင့်ကျက်တဲ့သူတွေကတော့ သူများနဲ့မတူစွာ ထူးခြားနေလေ့ ရှိပါတယ်။ ရင့်ကျက်တဲ့ ချစ်သူကောင်လေးတွေကလည်း တခြားသော မရင့်ကျက်တဲ့ ကောင်လေးတွေလိုမျိုး မဟုတ်ဘဲ အချစ်ရေးမှာ သင် စိတ်ကျေနပ်မှု ရှိစေအောင် လုပ်ပေးတတ်ကြပါတယ်။ ရင့်ကျက်တဲ့ ချစ်သူကောင်လေးတွေ ရှိထားရင်တော့ ဒီလိုအချက်လေးတွေကို တွေ့ရမှာပါနော်။ (၁) သဝန်မတိုတတ်ဘူး ရင့်ကျက်လာတဲ့ ကောင်လေးတွေက ကိုယ့်ချစ်သူကို ယုံကြည်မှုလည်း ပေးတတ်သလို အရှိတရားကိုလည်း လက်ခံတတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ကို မချစ်တော့ချိန်မှာ ထွက်သွားရင်လည်း သွားခွင့်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ရှိပြီး အနားမှာ ရှိနေတဲ့ ချစ်သူကို သဝန်တိုမှုတွေကြောင့် စိတ်ရှုပ်စေမှာမျိုးတွေ မလုပ်တတ်ကြပါဘူး။ (၂) သင်နဲ့ … Read more
လွယ်လွယ်မချစ်တတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ကောင်လေးတွေ ဘာကြောင့် အရူးအမူးဖြစ်တာလဲ
ယောကျာ်းလေးတော်တော်များများက လိုက်ရခက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေ၊ လွယ်လွယ်မချစ်တတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ပိုအသည်းအသန် လိုချင်တတ်ကြပါတယ်နော်။ တကယ်တော့ ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေက ဒီအချက်တွေကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုစိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလို့ လွယ်လွယ်မချစ်တတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေက တစ်ခြားမိန်းကလေးတွေနဲ့ မတူညီတာတော့ အမှန်ပါပဲနော်။ သူတို့တွေက ယောကျာ်းလေးတွေအပေါ် ခပ်တည်တည်ဆက်ဆံတတ်သလို မာနလည်း အနည်းငယ် ကြီးတတ်ကြသူတွေပါ။ ဒီအချက်ကပဲ ယောကျာ်းလေးတွေကို ပိုစိတ်ဝင်စားစေတဲ့ အချက်တွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ပိုတန်ဖိုးကြီးတယ်လို့ ထင်ရလို့ လူတွေရဲ့ သဘာဝက လွယ်လွယ်ရတဲ့အရာတိုင်းကို ဈေးပေါတယ်လို့ ထင်တတ်ကြပြီး ခက်ခဲလေလေ ပိုတန်ဖိုးရှိလေလို့ သတ်မှတ်တတ်ကြတာပါ။ ဒီတော့ ကိုယ့်ကိုယ် ငြင်းလေလေ ပိုစိတ်ဝင်စားလေလေ ဖြစ်ပြီး ပိုလည်း တန်ဖိုးထားရယူချင်တတ်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခက်ခဲလေ ပိုရယူချင်လေ ယောကျာ်းလေးတွေရဲ့ ပင်ကိုယ်ဗီဇအရ တိုက်ခိုက်အနိုင်ရယူချင်ကြတဲ့ သူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ … Read more
မိန်းကလေးတွေက ရွယ်တူ/အငယ်တွေထက် ကိုကိုမှကိုကိုဖြစ်နေရတဲ့ အကြောင်းအရင်း (၅)ချက်
မိန်းကလေးတွေက ရွယ်တူ/အငယ်တွေထက် ကိုကိုမှကိုကိုဖြစ်နေရတဲ့ အကြောင်းအရင်း (၅)ချက် အခုနောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ်နဲ့သက်တူရွယ်တူတွေ ၊ မောင်လေးတွေထက်စာရင် ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့ ကိုကိုတွေနဲ့ပဲ ချစ်သူဖြစ်ချင်ကြတဲ့မိန်းကလေးတွေ ပိုများလာပါတယ် ။ ကိုကိုတွေကိုတော့ မိန်းကလေးတွေက အချက် (၅)ချက်ကြောင့်ရွေးချယ်လာကြတာပါ ။ ဒီအချက်လေးတွေကတော့ …. ၁. ကိုကိုတွေက လုံခြုံမှုပေးတယ် မိန်းကလေးအများစုက ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ကို ကိုယ်မှီခိုအားထားလို့ရမယ့်သူမျိုးပဲဖြစ်စေချင်ကြတယ် ။ သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာလည်း လုံခြုံမှုပေးတဲ့သူမျိုး ၊ အခက်အခဲတွေကြုံလာရင်လည်း ရှေ့ကနေ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ပေးနိုင်တဲ့ အားကိုးရတဲ့သူမျိုးကိုပဲ ရွေးချယ်ချင်ကြတယ် ။ ဒီလိုအချက်တွေကို ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့ ကိုကိုတွေမှာပဲတွေ့ရတတ်တယ်လေ ။ ၂. အလေးအနက်ထားပြီး လေးလေးစားစားဆက်ဆံတယ် မိန်းကလေးတွေဆိုတာ ကြေကွဲဝမ်းနည်းလွယ်တယ် ။ သူတို့နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အရာတွေအကုန်လုံးကိုလည်း အလေးအနက်ထားစေချင်ကြတယ် ။ ဥပမာ – မွေးနေ့တို့ ၊ … Read more
ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ ကိုယ်က နှစ်ကိုယ့်တစ်စိတ် ဖြစ်နေကြပြီဆိုတာကို ပြနေတဲ့ လက္ခဏာရပ်များ
ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ ကိုယ်က နှစ်ကိုယ့်တစ်စိတ် ဖြစ်နေကြပြီဆိုတာကို ပြနေတဲ့ လက္ခဏာရပ်များ ချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့် ချစ်သူတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြပေမယ့်လည်း ရေရှည်လက်တွဲသွားရဖို့ဆိုတာ မသေချာပါဘူး။ ရေရှည်လက်တွဲသွားရဖို့ဆိုတာ နှစ်ယောက်လုံးက ဒီအချစ်ရေး တည်မြဲဖို့ ဘယ်လောက် အားထုတ်ကြလဲဆိုတာမှာ မူတည်နေပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး တည်မြဲတဲ့ အချစ်ရေး ရနေတဲ့သူတွေကတော့ နှစ်ကိုယ့်တစ်စိတ်လို့တောင် ပြောလို့ ရပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ ကိုယ်က နှစ်ကိုယ့်တစ်စိတ် ဖြစ်နေသလားဆိုတာကိုတော့ ဒီအချက်တွေကို ကြည့်ပြီး ဆန်းစစ်နိုင်ပါတယ်။ (၁) မရှက်တော့ဘူး ရင်ခုန်စအရွယ်မှာ ကိုယ့်ချစ်ရတဲ့သူရှေ့မှာ စတိုင်မကျနေရင် ရှက်တာမျိုး၊ အပြုအမူ မှားသွားတာနဲ့ ရှက်တာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ ချစ်မိသွားလို့ အချစ်ရေးက တည်မြဲလာတဲ့အခါမှာတော့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ရှက်တာမျိုးတွေ မရှိတော့ပါဘူး။ အိမ်နေရင်း အင်္ကျီနဲ့ တွေ့ကြလည်း အဆင်ပြေသလို … Read more
ဝတဲ့သူ၊ ဗိုက်ခေါက်ထွက်သူ၊ အဆီကျချင်သူများအတွက်
ဝတဲ့သူ ဗိုက်ပူတဲ့သူတွေ အတွက် ဗိုက်ကျစေမည့် ရှားစောင်းလက်ပတ်ယို လုပ်နည်း… ဝတဲ့သူတွေ ဒါမှမဟုတ် ဗိုက်ပူတဲ့သူတွေအတွက် အရမ်းအဆင်ပြေတယ်။ အိမ်ရှင်မ တော်တော်များများရဲ့ ဒုက္ခက ဗိုက်ပူတာပါပဲ။ ကဲနည်းလမ်းလေးကို ကြည့်ရအောင် ရှားစောင်းလက်ပတ် ငါးတက်လောက်ကို ဘေးက စူးသွားတွေကို ဓားနဲ့ခွာပီး လက်တစ်ဆစ်လောက်လေး တွေကိုလှီးပါ (အခွံမနွှာတော့ ထုပ်ထုပ်ထုပ် နဲ့ စားလို့ ကောင်းသလို ပိုဆေးဖက်ဝင်တာပေါ့) ထန်းလျက်(အညို) ငါးကျပ်သားလောက်ကို ဆီ ၅ ကျပ်သားလောက်ထဲကို ထည့်ပီး အရည်ပျော်အောင်မွှေပါ။ ထန်းလျက် အရည်ပျော်သွားရင် ရှားစောင်းလက်ပတ်ထည့်ပါ။ ရှားစောင်းလတ်ပတ်က အရည်ထွက်တဲ့အတွက် ခနခန မွှေပေးပါ ရှားစောင်းလက်ပတ် အရည်ခမ်းသွားပီး နည်းနည်းခပ်ပျစ်ပျစ် ဖြစ်လာရင် ငှက်ပျောသီးဖီးကြမ်း နှစ်လုံးကို ပါးပါးလှီးထည့်ပါ။ (ငှက်ပျောသီးက များလျှင် ချဉ်တတ်လို့ နှစ်လုံးဆို လုံလောက်ပါပြီ) … Read more
ချစ်ရသူနဲ့ အမြဲမခွဲ လက်တွဲသွားချင်တယ်ဆိုရင် ဒီအချက် (၅) ချက်ကို လိုက်နာပါ
ချစ်ရသူနဲ့ အမြဲမခွဲ လက်တွဲသွားချင်တယ်ဆိုရင် ဒီအချက် (၅) ချက်ကို လိုက်နာပါ ကိုယ့်ချစ်ရသူနဲ့ တစ်သက်လုံး လက်တွဲပြီး ဘ၀ခရီးလမ်းကို အတူလျှောက်လှမ်းချင်ပါသလား။ နှစ်ဦးသား လိုက်နာရမယ့် အချက်လေးတွေတော့ ရှိပါတယ်။ ဒီအချက်လေးတွေက သင်တို့နှစ်ဦး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ပိုနားလည်လာအောင်၊ သံယောဇဉ်ပိုရှိလာအောင် ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ မယုံမရှိပါနဲ့။ ၁။ ဖြေးဖြေးချင်း ရှေ့ဆက်ပါ။ စိတ်မြန်၊ လက်မြန် ဘယ်အရာကိုမှ မလုပ်မိပါစေနဲ့။တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နားလည်မှုရှိအောင် ကြိုးစားဖို့ဆို ဘယ်အရာကိုမှ အလျှင်စလို လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ တစ်ဆင့်ချင်းသွားပါ။ အတူနေဖို့၊ ချစ်တင်းနှီးနှောဖို့ ကိစ္စတွေကအစ ရည်းစားဖြစ်ပြီးပြီးချင်း လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့အရာတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ အားလုံးကို တစ်ဆင့်ချင်း လုပ်ဆောင်သွားပါ။ အချိန်ယူပါ။ ၂။ သင်လိုအပ်တာက ဘာဆိုတာ ပြောပြပါ။ နှစ်ဦးသား နှစ်ရှည်လများ လက်တွဲသွားကြဖို့ဆိုရင် တစ်ယောက် လိုအပ်ချက်ကို … Read more
ပါးစပ်ကနေ ဖွင့်မပြောပေမဲ့ လမ်းခွဲချင်နေမှန်းသိသာစေတဲ့ ယောကျာ်းတွေရဲ့ အပြုအမူများ သမီးရည်းစား Relationship တစ်ခုမှာ ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ကို စိတ်ကုန် လာပြီလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်က မိန်းကလေးတွေမှာ ပိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ စစ်တ မ်းတွေအရဆိုရင် Relationship တွေမှာ မိန်းကလေးတွေဘက်ကနေ အရင် စပြီး လမ်းခွဲတာများပါတယ်။ ယောက်ျားအများစုက လမ်းခွဲရအောင်ဆိုတဲ့ စကားကို သူတို့ဘက်ကနေ အရင်စပြီး ပါးစပ်ကနေ ဖွင့်မပြောပေမယ့် တစ်ဖက် မိန်းကလေး သူ့အပေါ် စိတ်ပျက်ပြီး လမ်းခွဲချင်လာအောင် လုပ်ပြ၊ နေပြတတ်ကြပါတယ်။ နှုတ်ကနေ၊ ပါးစပ်ကနေ ထုတ်မပြောပေမယ့် သူကိုယ့်ကို လမ်းခွဲချင်နေပြီဆိုတာကို ဘယ်လိုသိနိုင်လဲ..? ချစ်သူကောင်လေးကို လမ်းခွဲချင်လာပြီဆိုရင် ယောက်ျားတွေ (ပါးစပ်ကနေ လမ်းခွဲရအောင်လို့တော့ ဖွင့်မပြောပေမယ့်) လုပ်ပြတတ်တဲ့ အပြုအမူတွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့… (၁)အေးစက်လာတာ.. ဒါကတော့ … Read more
ရေစက်သာပါလာရင် ကြံဖန်ပြီးဆုံရသလိုပဲ ရေစက်မပါရင် ကြံဖန်ပြီးလွဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလေး ကြားဖူးကြမှာပါ လူတိုင်းကရေစက်ပါလို့တွေ့ဆုံကြသလိုပဲ ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်ဆိုတာ လည်း အတိတ်ဘဝကဆုံဖူး ဆုတောင်းခဲ့ဖူးတဲ့ဆုတောင်းတွေကြောင့် အခုဘဝမှာလက်တွဲ ဖော်အနေနဲ့ပြန်ဆုံတွေ့တယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ကိုယ်တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ မဆုံဖူးပါပဲ မြင်မြင်ချင်းချစ်မိတဲ့အချစ်ဆိုတာ အတိတ်ဘဝကရှေးရေစက်ကြောင့်ဖြစ်လာရတဲ့အချစ်လို့ယုံ ကြည်ထားကြပါတယ်။ သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ရေစက်လားဆိုတာကို သိနိုင်တဲ့ အချက်လေးတွေရှိပါတယ်။ ၁။ ပထမဆုံးဆုံတဲ့အခါ ရင်းနှီးနေတဲ့ ခံစားချက်မျိုး သူနဲ့ပထမဆုံးစတွေ့တဲ့အချိန်မှာ အရင်ထဲကတွေ့ခဲ့ဖူးသလို၊ တစ်နေရာမှာမြင်ဖူးခဲ့သလို စိတ်ထဲမှာရင်းနှီးနေတဲ့ခံစားချက်မျိုးရလိုက်တာပါ။ မြင်မြင်ချင်းချစ်မိတာမျိုးမဟုတ်ရင်တောင် ခဏလေးအတွင်းမှာ အနှစ်နှစ်အလလကခင်မင်ခဲ့ဖူးသလိုမျိုး သံယောဇဉ်တွယ်ပြီး ချစ်မိသွားတာမျိုးပါ။ တကယ်ရှေးရေစက်သာဆိုရင် စိတ်ချပါ သင့်အချစ်ကတစ်ဖက်သက်လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး၊ သူဘက်ကလည်း သင့်လိုတစ်ထပ်တည်းခံစားရမှာပါ။ ၂။ အကြောင်းအရင်း မတိုက်ဆိုင်ပါပဲ သူနဲ့ဆုံတွေ့ရတာမျိုး အစမှာပြောခဲ့သလိုပါပဲ ရေစက်ပါလာရင် ရှောင်လွဲလို့မရပါဘူး။ ကြံဖန်ပြီးကိုဆုံရမှာပါ။ ပထမဆုံးတွေ့ရုံနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ခံစားချက်မျိုးထက် သူက ကိုယ့်ရှေ့ကိုအကြောင်းအရင်းမတိုက်ဆိုင် … Read more